September 2019 - SamudayikNews
Sep282019 by userNo Comments
जापानका लागि अनलाइन आवेदन खुल्यो, निश्चित कामदार मात्र जान पाउने
जापानमा रोजगारीका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन आवेदन खुलेको छ। जापान जान चाहने इच्छुक व्यक्तिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन पाउनेछन्। अनलाइन आवेदन असोज १६ गतेसम्म खुल्ला रहने छ । इच्छुक सबैले आवेदन दिन पाए पनि जापानिज रोजगारीका लागि एक हजार जनाले मात्रै भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् । आवेदन दिएका मध्येबाट सफ्टवेयरको सहायताले लक्की ड्रमार्फत आवेदक छानिने भएको हो । जापानले पहिलो चरणमा नर्सिङ केयर (केयर गिभर)का लागि नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका मात्रै केयर गिभरका लागि जापान जान पाउनेछन्। भाषा परीक्षाका लागि जापानले असोज २२ गते नतिजा प्रकाशन गर्नेछ। लक्की ड्रमार्फत छानिएकाले असोज २४ गते दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै भौचर पाउने व्यवस्था रहेको छ । जापानले युनिभर्सल ल्याङवेज एन्ड कम्प्युटर इन्स्टिच्युटबाट कम्प्युटरमा आधारित भाषा र सीप परीक्षा सञ्चालनको
Sep272019 by userNo Comments
सरकारले बडादशैँको पहिलो दिन (घटस्थापना) यही असोज १२ गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा सो दिन प्रदेशस्थित सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक निकायमा बिदा दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले वर्षमा छ दिन बिदा दिनसक्ने व्यवस्थाअनुसार विभिन्न पक्षको मागअनुसार बिदाको निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाल सुधार गृह, हिरासत र थुनुवा कक्ष तथा कारागार निरीक्षण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, ‘दिगो विकास लक्ष्य ः गण्डकी प्रदेशको आधार रेखा’ प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेर काफलडाँडा मान्द्रे वन उपभोक्ता समितिको
उडुस बारेमा सोच्दा पनि कतिपयलाई रातभर निद्रा नै लाग्दैन । उडुसको टोकाइबाट शरीर चिलाउने, सुन्निने तथा एलर्जी हुने गर्छ । उडुस सानो र छिट्टै लुक्ने परजीवी भएकाले यसलाई खोजेर निर्मूल पार्न एकदमै कठिन हुन्छ । एउटा माउ उडुसले आफ्नो जीवन कालभर ५ सय अण्डा पार्छ । ती अण्डाबाट निस्कने बच्चाले पछि फेरि अण्डा निष्कासन गर्छ । यसरी प्रत्येक पिढीमा तिनको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र यिनीहरू झुण्ड हुँदै पूरै घरभरि फैलन्छन् । त्यसैले, तिनको रोकथाममा जति ढिलाइ गर्यो, त्यति नै प्रकोप बढ्छ र नियन्त्रण गर्न पनि कठिन हुन्छ । उडुसलाई निर्मुल पार्न यसकारणले पनि कठिन छ कि, यिनीहरू नखाएर पनि लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् उडुस भगाउने घरेलु विधिहरु : पुदिना रस : उडुसले पुदिनाको गन्ध सहन सक्दैन । त्यसैले, पुदानाका केही पात आफ्नो ओछ्यानको नजिक राख्नुहोस् । यदि तपाईंको घरमा साना बच्चा छन् भने उनीहरू सुत्ने ठाउँमा पनि पुदिनाक
कस्तो अचम्मै भो! मृ’त्यु घोषित युवा गा’ड्न लाग्दा ब्युँतिएपछि…
एजेन्सी । भारतको लखनऊमा एक युवालाई चि'हानमा गाड्ने तयारी पूरा हुँदै गर्दा अचम्मको घटना घटेको छ । २० बर्ष का मोहम्मद फुरकानलाई चिहानमा गा'ड्न लाग्दा आफ्नो घरका केही सदस्यले अचानक उसमा केही हरकत देख्दा चि'हानमा गाड्ने प्रकृया रोक्न लगाई उनलाई तुरुन्त अस्पताल लगिएको थियो। जसमा उनलाई डाक्टरले जीवित रहेको बताएका छन् । फुरकान २१ जूनमा एक दु'र्घटनामा घाइते भएर निजी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनलाई उक्त अस्पतालमा मृ'त घोषणा गरिएको थियो । उनको शरीरलाई एम्बुलेन्समा राखेर घर पठाइएको थियो । ठूलो भाई मोहम्मद इरफान यो घटनालाई लिएर अचम्मित बनेका छन्, उनलाई आफ्नो भाइ फर्कि आएको विश्वास नै लागेको छैन । फुरकानको उपचार को लागि निजी अस्पतालमा ७ लाख खर्च भैसकेको र उनको परिवारले आफुहरुसँग पैसा सकिएको अस्पताललाई बताएसँगै अस्पतालले उनलाई मृ'त घोषणा गरेको मोहम्मद इरफानले बताएका छन् । लखनउका मुख्य चिकित्सा अधिकार
एउटा गीतले दिलाएको लोभलाग्दो सफलता, जस्ले चुजी बनाउन सिकायो!
अञ्जली अधिकारी बर्दियाको मैनापोखरीमा रहेको स्कुलमा पढिरहेकी थिइन् । त्यो समय बर्दिया महोत्सव आयोजना भयो । त्यहाँ बद्री पंगेनी, पशुपति शर्मा, शंकर विसी लगायत उपस्थित थिए । सानैदेखि नाच्न रुचाउने अन्जली अधिकारी पनि उक्त महोत्सवसम्म पुगिन् । बद्री पंगेनीको गीत गाउने पालो आयो । हातमा माइक समातेर बद्रीले बोले, ‘मैले जबसम्म गीत गाउँछु, त्यो बेलासम्म नाच्नेलाई पुरस्कार दिन्छु ।’ बद्रीले गीत गाउन सुरु गरे । अन्जली लगायतका धेरै सहभागी पुरस्कारको लागि नाच्न थाले । बद्रीले लगातार एकपछि अर्को गीत गाउँदै गए, अरु सहभागीहरु थाके । तर, अञ्जलीले अन्त्यसम्म नाचिरहिन् र ५ सय पुरस्कार पाइन् । त्यही मौकामा उनले बद्रीलाई आफ्नो नृत्यमा रुची हुनुका साथै म्युजिक भिडियो तथा चलचित्र खेल्ने रहर लागेको बताइन् । बद्रीले ‘हुन्छ’को आश्वसन दिए । एसएलसीपछि भागेर काठमाडौं: स्कुल पढ्दा शिक्षक र साथीहरुले अन्जलीको नृत्यको प